Arizona ပြည်နယ် မဲရုံရှေ့တွင် ဆန္ဒပြနေသူများ
ဆန္ဒမဲတွေ ရေတွက်လို့ မပြီးသေးတဲ့ အမေရိကန် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ အဖြေသိရဖို့ပြည်နယ်ပေါင်း ၇ ပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့ Wisconsin၊ Nevada၊ Arizona၊ Michigan၊ Pennsylvania၊ Georgia နဲ့ North Carolina တို့က ထွက်လာမယ့် ရလဒ်တွေဟာ အလွန်အရေးပါနေပါတယ်။
အဲဒီပြည်နယ်တွေထဲက Pennsylvania နဲ့ Arizona မှာနေထိုင်တဲ့ မြန်မာနွယ်ဖွား မဲဆန္ဒရှင်တွေဖြစ်တဲ့ မခိုင်ငွေနှင်းဇော်နဲ့ မဆုရီအောင်တို့ကို သူတို့ပြည်နယ်တွေမှာ မဲရေတွက်နေတဲ့ နောက်ဆုံး အခြေအနေ၊ သူတို့ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ ကိုမအင်ကြင်းနိုင်က Skype ကနေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
မအင်ကြင်းနိုင်။ ။ ဆိုတော့ မဆုရည်အောင်ရေ၊ အခု Arizona ပြည်နယ်မှာ နောက်ဆုံး မဲတွေရေတွက်နေတဲ့ အခြေအနေ ဘာတွေ ဖြစ်နေပြီလဲရှင့်။
မဆုရည်အောင် ။ ။ အခု ဆုတို့ ဒီသတင်းတွေမှာ တက်လာတာကို ကြည့်ရသလောက်ကတော့ ဒီမိုကရက်ဘက်က မဲအရေအတွက် သာနေတာကို တွေ့ရတယ်။ အဲဒီဟာကြောင့် ဆုတို့ Downtown မှာ မနေ့ည နိုဝင်ဘဘာ ၄ ရက်နေ့၊ ၇ နာရီ ၀န်းကျင်လောက်မှာ ဆန္ဒပြမှုတွေ Downtown ရဲ့ Capital building ဘက်မှာ ဖြစ်ပွားနေတာကို ဆုတို့သတင်းမှာ တက်လာတာကို တွေ့ရတယ်။ အခုလက်ရှိအခြေအနေကတော့ အဲဒါမျိုးတွေ ဆုတို့ တွေ့ရတယ်။
မအင်ကြင်းနိုင်။ ။ မြို့ထဲမှာ ဆန္ဒပြနေတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူတွေက ဆန္ဒပြနေကြတာလဲရှင့်။
မဆုရည်အောင် ။ ။ သတင်းမှာ ဖတ်ရသလောက်ကတော့ ပထမ စစချင်း ၇ နာရီလောက်မှာ စတာကတော့ Patriots extremist group ကနေပြီးတော့ စပြီးတော့ ဒီ Sheriff building ဘက်ကို မဲရေတွက်တဲ့ ရုံးဘက်ကို သူတို့ကနေ စလာပြီးတော့ Military ၀တ်စုံဝတ်ထားတဲ့ လူတယောက်ကနေပြီးတော့ နင်တို့တွေ Sharpe pen တွေနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ မဲတွေကို ပယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ ဒီမဲတွေကို ဘာလို့ မရေတွက်ရသလဲ ၊ ဒီမဲတွေကို ဘာလို့ မ Count ရတာလဲဆိုပြီးတော့ သူတို့ကနေ ဆန္ဒအရင်စပြတယ်။ သူတို့ပြတဲ့ နောက်မှာမှ ဒီ Republican အဖွဲ့ပေါ့နော် Support လုပ်တဲ့သူတွေနဲ့ Democrat ကို Support လုပ်တဲ့သူတွေ Join လာပြီးတော့မှ လူ ၂၀၀ လောက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် ဆန္ဒပြသူတွေ။ ဒါပေမယ့် သူတို့က အေးအေးချမ်းချမ်းပဲ ဆန္ဒပြတယ်။ ည ၁၀ နာရီလောက်မှာတော့ အစိုးရကနေ ရှင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ လူကျဲသွားပြီးတော့ ည ၁၀ နာရီ ၄၅ နောက်ပိုင်းမှာတော့ လူ ၅၀ လောက်ဆက်ပြီးတော့ ဆန္ဒဆက်ပြနေတယ် Parking Lot မှာပေါ့နော်။
မအင်ကြင်းနိုင်။ ။ နောက်ဆုံးမဲရေတွက်တဲ့အခြေအနေကတော့ ဘယ်တော့ပြီးမယ်လို့ သိရသလဲရှင့်။
မဆုရည်အောင် ။ ။ အဲဒါကတော့ တိတိကျကျ မသိရသေးဘူးပေါ့နော်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Arizona အတွက်က စာတိုက်ကနေ ပို့တဲ့ မဲတွေက အရမ်းကို များသွားတဲ့အတွက် သူတို့က ဒါဟာ ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲပေါ့နော် အရင်နှစ်တွေက မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဒီ Arizona မှာက အရင်တုန်းကဆိုရင် Mail in လုပ်တာက အရမ်းရှားတယ်။ ဒီနှစ်က Arizona က စံချိန်တင်သွားတယ်ပေါ့နော်။ တခြား ၁၆ ပြည်နယ်ထက်ကို Arizona ကနေပြီးတော့ Mail in လုပ်တာက အရမ်းကို များသွားတဲ့အတွက် သူတို့ Count တာတွေက အလျှင်ကို မလိုက်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ အလျှင်မလိုက်နိုင်တဲ့အတွက် ပြောဖို့က အရမ်းခက်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်နေ့ အမေရိကန် စံတော်ချိန် ညဘက်မှာ သိရမယ်လို့လည်း အဲလိုတွေလည်း ကြားတယ်ပေါ့နော်။
မအင်ကြင်းနိုင်။ ။ အခု Pennsylvania ပြည်နယ်မှာရော မဲရေတွက်တဲ့ အခြေအနေတွေ ဘယ်လိုရှိနေသလဲရှင့် မခိုင်ဝေနှင်းဇော်ရေ ပြောပြပါဦး။
မခိုင်ငွေနှင်းဇော်။ ။ ဟုတ်ကဲ့အမရေ Pennsylvania ပြည်နယ်ကြီးက အကြီးကြီးပဲဆိုတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ။ နောက်တခုက Pennsylvania ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့က Pennsylvania ပြည်နယ် ကို Key Stone State လို့ခေါ်ပါတယ်။ အရမ်းကို ရွေးကောက်ပွဲ အစဉ်လိုက် အဆက်လိုက်၊ အစဉ်အဆက်လိုက်ကို တောက်လျှောက်ကို အမြဲတမ်း အရေးပါခဲ့တဲ့ State ပေါ့နော်။ အဲဒီတော့ ဒီ State မှာဆိုရင် အခုလက်ရှိ အမနဲ့ စကားမပြောခင် ၁၀ မိနှစ်အလိုမှာ ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဒီမိုကရက်ဘက်က မဲအရေအတွက် ၃. ၁ သန်းကျော်ပေါ့နော်။ Donald Trump ဘက်က ရနေတဲ့ မဲနဲ့ စုစုပေါင်း ၁ သိန်း ၇ သောင်းလောက် ကွာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်း Mail in Ballot တွေက စုစုပေါင်း ၂.၅ သန်းရှိပါတယ်အမ။ ၂.၅ သန်း Mail in Ballot အများဆုံးက ဒီမိုကရက်တွေကနေပြီးတော့ ပေးထားတာပေါ့။ ဒါက ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆို Register လုပ်ထားတာပေါ့၊ ကိုယ် Register လုပ်ထားတဲ့ပါတီဝင်တွေက Count လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်က Mail in Ballot ကို ကြိုတောင်းထားသလဲ။ ဘယ်ပါတီဝင်တွေက Mail in Ballot ကို ကြိုပြီးတော့ ပို့ထားသလဲဆိုတဲ့ စာရင်းတွေက County တိုင်း County တိုင်းမှာ ရှိပါတယ်။ ဒါအစိုးရ အဖွဲ့အစည်း အကုန်လုံးတိုင်းမှာ ဒီ စာရင်းဇယားတွေက ရှိပြီးသားပေါ့နော်။ ဒါတွေက လိမ်လို့မရဘူး။ အခုနောက်ရေမယ့် မဲတွေက Pennsylvania ပြည်နယ်မှာဆိုရင် ထပ်ရေတာ မှန်သမျှက Biden ဘက်ကို ပိုအားသာဖို့ အခွင့်အလမ်း များပါတယ်အမ။
မအင်ကြင်းနိုင်။ ။ မဆုရည်အောင် နဲ့ မခိုင်ငွေနှင်းဇော် တို့ကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
ကနျရှေးကောကျပှဲ အရေးကွီးပွညျနယျ ၂ ခု မဲရတှေကျမှုအခွအေနေ
ဆန်ဒမဲတှေ ရတှေကျလို့ မပွီးသေးတဲ့ အမရေိကနျ သမ်မတရှေးကောကျပှဲ အဖွသေိရဖို့ပွညျနယျပေါငျး ၇ ပွညျနယျဖွဈတဲ့ Wisconsin၊ Nevada၊ Arizona၊ Michigan၊ Pennsylvania၊ Georgia နဲ့ North Carolina တို့က ထှကျလာမယျ့ ရလဒျတှဟော အလှနျအရေးပါနပေါတယျ။
အဲဒီပွညျနယျတှထေဲက Pennsylvania နဲ့ Arizona မှာနထေိုငျတဲ့ မွနျမာနှယျဖှား မဲဆန်ဒရှငျတှဖွေဈတဲ့ မခိုငျငှနှေငျးဇျောနဲ့ မဆုရီအောငျတို့ကို သူတို့ပွညျနယျတှမှော မဲရတှေကျနတေဲ့ နောကျဆုံး အခွအေနေ၊ သူတို့ရဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြတှေ ကိုမအငျကွငျးနိုငျက Skype ကနေ ဆကျသှယျမေးမွနျးထားပါတယျ။
မအငျကွငျးနိုငျ။ ။ ဆိုတော့ မဆုရညျအောငျရေ၊ အခု Arizona ပွညျနယျမှာ နောကျဆုံး မဲတှရေတှေကျနတေဲ့ အခွအေနေ ဘာတှေ ဖွဈနပွေီလဲရှငျ့။
မဆုရညျအောငျ ။ ။ အခု ဆုတို့ ဒီသတငျးတှမှော တကျလာတာကို ကွညျ့ရသလောကျကတော့ ဒီမိုကရကျဘကျက မဲအရအေတှကျ သာနတောကို တှရေ့တယျ။ အဲဒီဟာကွောငျ့ ဆုတို့ Downtown မှာ မနညေ့ နိုဝငျဘဘာ ၄ ရကျနေ့၊ ၇ နာရီ ဝနျးကငျြလောကျမှာ ဆန်ဒပွမှုတှေ Downtown ရဲ့ Capital building ဘကျမှာ ဖွဈပှားနတောကို ဆုတို့သတငျးမှာ တကျလာတာကို တှရေ့တယျ။ အခုလကျရှိအခွအေနကေတော့ အဲဒါမြိုးတှေ ဆုတို့ တှရေ့တယျ။
မအငျကွငျးနိုငျ။ ။ မွို့ထဲမှာ ဆန်ဒပွနတေယျဆိုတာ ဘယျသူတှကေ ဆန်ဒပွနကွေတာလဲရှငျ့။
မဆုရညျအောငျ ။ ။ သတငျးမှာ ဖတျရသလောကျကတော့ ပထမ စစခငျြး ၇ နာရီလောကျမှာ စတာကတော့ Patriots extremist group ကနပွေီးတော့ စပွီးတော့ ဒီ Sheriff building ဘကျကို မဲရတှေကျတဲ့ ရုံးဘကျကို သူတို့ကနေ စလာပွီးတော့ Military ဝတျစုံဝတျထားတဲ့ လူတယောကျကနပွေီးတော့ နငျတို့တှေ Sharpe pen တှနေဲ့ လုပျထားတဲ့ မဲတှကေို ပယျတယျဆိုပွီးတော့ ဒီမဲတှကေို ဘာလို့ မရတှေကျရသလဲ ၊ ဒီမဲတှကေို ဘာလို့ မ Count ရတာလဲဆိုပွီးတော့ သူတို့ကနေ ဆန်ဒအရငျစပွတယျ။ သူတို့ပွတဲ့ နောကျမှာမှ ဒီ Republican အဖှဲ့ပေါ့နျော Support လုပျတဲ့သူတှနေဲ့ Democrat ကို Support လုပျတဲ့သူတှေ Join လာပွီးတော့မှ လူ ၂၀၀ လောကျဖွဈသှားတယျပေါ့နျော ဆန်ဒပွသူတှေ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့က အေးအေးခမျြးခမျြးပဲ ဆန်ဒပွတယျ။ ည ၁၀ နာရီလောကျမှာတော့ အစိုးရကနေ ရှငျးလိုကျတဲ့အခြိနျမှာတော့ လူကြဲသှားပွီးတော့ ည ၁၀ နာရီ ၄၅ နောကျပိုငျးမှာတော့ လူ ၅၀ လောကျဆကျပွီးတော့ ဆန်ဒဆကျပွနတေယျ Parking Lot မှာပေါ့နျော။
မအငျကွငျးနိုငျ။ ။ နောကျဆုံးမဲရတှေကျတဲ့အခွအေနကေတော့ ဘယျတော့ပွီးမယျလို့ သိရသလဲရှငျ့။
မဆုရညျအောငျ ။ ။ အဲဒါကတော့ တိတိကကြ မသိရသေးဘူးပေါ့နျော။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ Arizona အတှကျက စာတိုကျကနေ ပို့တဲ့ မဲတှကေ အရမျးကို မြားသှားတဲ့အတှကျ သူတို့က ဒါဟာ ဖွဈတောငျ့ဖွဈခဲပေါ့နျော အရငျနှဈတှကေ မဖွဈခဲ့ဘူး။ ဒီ Arizona မှာက အရငျတုနျးကဆိုရငျ Mail in လုပျတာက အရမျးရှားတယျ။ ဒီနှဈက Arizona က စံခြိနျတငျသှားတယျပေါ့နျော။ တခွား ၁၆ ပွညျနယျထကျကို Arizona ကနပွေီးတော့ Mail in လုပျတာက အရမျးကို မြားသှားတဲ့အတှကျ သူတို့ Count တာတှကေ အလြှငျကို မလိုကျနိုငျဘူး ဖွဈနတေယျ။ အလြှငျမလိုကျနိုငျတဲ့အတှကျ ပွောဖို့က အရမျးခကျနပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီ နိုဝငျဘာ ၅ ရကျနေ့ အမရေိကနျ စံတျောခြိနျ ညဘကျမှာ သိရမယျလို့လညျး အဲလိုတှလေညျး ကွားတယျပေါ့နျော။
မအငျကွငျးနိုငျ။ ။ အခု Pennsylvania ပွညျနယျမှာရော မဲရတှေကျတဲ့ အခွအေနတှေေ ဘယျလိုရှိနသေလဲရှငျ့ မခိုငျဝနှေငျးဇျောရေ ပွောပွပါဦး။
မခိုငျငှနှေငျးဇျော။ ။ ဟုတျကဲ့အမရေ Pennsylvania ပွညျနယျကွီးက အကွီးကွီးပဲဆိုတော့ သိတဲ့အတိုငျးပဲ။ နောကျတခုက Pennsylvania ကိုပွောရမယျဆိုရငျတော့ သူတို့က Pennsylvania ပွညျနယျ ကို Key Stone State လို့ချေါပါတယျ။ အရမျးကို ရှေးကောကျပှဲ အစဉျလိုကျ အဆကျလိုကျ၊ အစဉျအဆကျလိုကျကို တောကျလြှောကျကို အမွဲတမျး အရေးပါခဲ့တဲ့ State ပေါ့နျော။ အဲဒီတော့ ဒီ State မှာဆိုရငျ အခုလကျရှိ အမနဲ့ စကားမပွောခငျ ၁၀ မိနှဈအလိုမှာ ကွညျ့လိုကျတဲ့အခါမှာ ဒီမိုကရကျဘကျက မဲအရအေတှကျ ၃. ၁ သနျးကြျောပေါ့နျော။ Donald Trump ဘကျက ရနတေဲ့ မဲနဲ့ စုစုပေါငျး ၁ သိနျး ၇ သောငျးလောကျ ကှာပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခုနောကျပိုငျး Mail in Ballot တှကေ စုစုပေါငျး ၂.၅ သနျးရှိပါတယျအမ။ ၂.၅ သနျး Mail in Ballot အမြားဆုံးက ဒီမိုကရကျတှကေနပွေီးတော့ ပေးထားတာပေါ့။ ဒါက ဘယျနိုငျငံမှာမဆို Register လုပျထားတာပေါ့၊ ကိုယျ Register လုပျထားတဲ့ပါတီဝငျတှကေ Count လုပျလို့ရပါတယျ။ ဘယျနှဈယောကျလောကျက Mail in Ballot ကို ကွိုတောငျးထားသလဲ။ ဘယျပါတီဝငျတှကေ Mail in Ballot ကို ကွိုပွီးတော့ ပို့ထားသလဲဆိုတဲ့ စာရငျးတှကေ County တိုငျး County တိုငျးမှာ ရှိပါတယျ။ ဒါအစိုးရ အဖှဲ့အစညျး အကုနျလုံးတိုငျးမှာ ဒီ စာရငျးဇယားတှကေ ရှိပွီးသားပေါ့နျော။ ဒါတှကေ လိမျလို့မရဘူး။ အခုနောကျရမေယျ့ မဲတှကေ Pennsylvania ပွညျနယျမှာဆိုရငျ ထပျရတော မှနျသမြှက Biden ဘကျကို ပိုအားသာဖို့ အခှငျ့အလမျး မြားပါတယျအမ။
မအငျကွငျးနိုငျ။ ။ မဆုရညျအောငျ နဲ့ မခိုငျငှနှေငျးဇျော တို့ကို ကြေးဇူးအမြားကွီးတငျပါတယျ။